Ny ahiahy, hifidianana… | NewsMada
Ny ahiahy, hifidianana…
« Ny ahiahy, tsy ihavanana. » Amin’izao fifidianana filohan’ny Repoblika izao, eo hatrany izay ahiahy tsy ihavanana izay; eny, na efa andro aza sisa no isaina. Nahoana? Efa hatrany am-boalohany ny tsy fifampitokisana, ka tsy mahafa-bela ny fiandrasan’ny sasany kendry tohina, ny filana kisa, ny fitsikerana, fanoherana…
Anisan’ny fototr’izany, ohatra, ny lalàm-pifidianana, nahitsin’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC) amin’izay mahamety azy. Tsy nisy ny famerenana izany any amin’ny fahefana mpanao lalàna, na efa hita izao aza fa nampifanditra. Zary an-kifonofono ny lalàm-pifidianana, ka izao vao ifandroritana?
Maro ireo lafin-javatra tsy mampitovy hevitra, na mampifanditra amin’izao fotoana izao no tokony ho nampidirina sy mazava ary teny ierana amin’izany lalàm-pifidianana izany: ny fotoana mialoha ny fampielezan-kevitra, ny vola ampiasain’ny kandidà mandritra ny fampielezan-kevitra, ny lisitry ny mpifidy…
Amin’izao fotoana izao, efa tongotra mby an-dakana ny firosoana sy ny fanatanterahana ny fifidianana: raha mijanona na miverin-dalana, potraka… Inona ny vahaolana? Mandeha ny fotoana. Eo hatrany ny ahiahy, tsy ihavanana. Tsy azo averin-dalana na iverenan-dalana ny fifidianana? Ny ahiahy, hifidianana izany…
Any amin’izay fifidianana izay no hifandresen-dahatra, araka izay maharesy lahatra ny tsirairay. Politika io: safidy fa tsy didy ny mifidy. Aleo hampiadiana sy hiady ny hevitra mba tsy hiady ny olona! Maro ny azo isafidianana, na azo atao amin’izao fifidianana izao. Anjaran’ny tsirairay ny manapa-kevitra.
Ny tsirairay mitambatra no vahoaka hoe tompon’ny teny farany sy mitsara. Koa tsy aleo hotsarain’ny vahoaka àry izay hoe mety mampiahiahy rehetra? Na hifidy izy na tsia, na hanao vato fotsy na tsia, na hifidy izay kandidà maharesy lahatra azy… Arakaraka ny fifandanjan-kery izay, na toy inona tsy fitovian-kevitra?